Fantatrao ve hoe inona no mampifandray ny SEO sy ny votoatin'ny tranonkala fanatsarana?
Ny votoatin'ny votoaty dia mihamaro hatrany, indrindra indrindra momba ny tetikady ara-barotra amin'ny aterineto. Anisan'ireo lahatsary matanjaka indrindra amin'ny lahatsary fampahalalana tafiditra ao amin'ny pejy web izany, hitako voalohany ny tombontsoa toy izany, amin'ny fitarihana ny fitarihana bebe kokoa, ny fanamafisana orina kokoa ny marika famantarana ny marika amin'ny fanentanana tsaratsara kokoa, ary farany mety hitera-bola ho an'ny tontolon'ny aterineto amin'ny ankapobeny.
Amin'ny ankapobeny, ampifandraisina amin'ny votoatin-dresaka amin'ny haino aman-jery sosialy irery ihany ny votoaty video. Saingy fahadisoana lehibe hinoana izany. Eny, Mazava ho azy, ny Twitter, Facebook, ary YouTube ihany koa ny zavatra tsara ho an'ny fametrahana horonantsary fanentanana manintona. Ireo sehatra rehetra ireo dia ampiasaina-azo ampiasaina tsara ary mifanentana tsara amin'ny fanaovana toy izany - braun oral b 4000a. Saingy misy fanontaniana manahiran-tsaina ankoatra izay - raha toa ka misy fifamatorana lalina kokoa eo amin'ny SEO sy ny votoaty video? Araka ny fijerin'ny fikarohana ankehitriny dia misy lafiny maro kokoa mihoatra noho ny votoatiny. Raha ny tena izy, raha ny fijerin'ny milina fikarohana, manana votoatim-pandinihana tsara azo atao dia toy ny manana votoaty tsara, fa amin'ny fomba manokana azy manokana. Ireto ambany ireto dia fijerena fohy - na ny SEO sy ny votoaty dia tokony ho tonga amin'ny tànana mba hitondra ny fitohanan'ny orinasam-pitaterana bebe kokoa izay mahazatra hatrany amin'ny fitarihana mahomby? Sa mbola tsy misy ihany? Okay, mihomehy eto aho. Raha ny amiko, dia tena ilaina ny manana ny fepetran-tsoratra miorina amin'ny SEO sy ny votoatin'ny votoaty mifamatotra mifandraika amin'ny samy hafa dia efa lasa toe-javatra tsy dia mahazatra loatra. Hanaporofo aho fa marina izany. Ireto ambany ireto dia hasehoko anao toro-hevitra maharesy lahatra momba ny fananana fanatsarana kely amin'ny lahatsary miaraka amin'ny fahombiazan'ny orinasanao amin'ny aterineto.
Alohan'ny hanombohantsika dia aoka ho fantatsika ny soso-kevitra tsotra - SEO sy tranonkala SEO sy ny fijerena votoaty amin'ny votoaty dia mitovy, nefa mbola tsy mitovy. Tahaka ny votoaty an-tsoratra voalohany, ny lahatsary dia asongadin'i Google amin'ny fandinihana ny votoatin'ny kalitao sy ny isan'ny backlinks mahery. Andao hojerentsika ny zavatra niainako teo aloha mba hampiasana tsara kokoa ny toetoetrany.
Voalohany indrindra, avelao ny handefa ny fandikana video. Ny fananana ny votoatin'ny lahatsary voatanisa ao amin'ny pejin-tranonkalanao dia mety ho an'ny rehetra: ireo mpampiasa tena dia manana data mavesa-danja sy mahasarika ho an'ny fiovam-po ambony, raha toa kosa ka ny fitaovam-pikarohana dia mety hanome anao amina toerana tsara kokoa amin'ny SERP. Raha manao izany isika, dia tsy maintsy manao izay vitantsika isika mba hanampiana ireo mpitsikilo "hamaky" votoatin-dahatsary mitovy amin'ny hoe sombin-tsoratra tsotra fotsiny. Mila rakipeo feno tanteraka ianao, ary koa ireo lahatsoratry ny lahatsoratr'ireo horonan-tsary rehetra horaisinao. Mba hanaovana izany, dia manolo-kevitra aho amin'ny fampiasana traikefa mendrika amin'ity sehatra nataon'i Moz ity (jereo ny lahatsary mahafinaritra ao amin'ny Whiteboard Friday). Azonao atao ny mijery ny podcasts tsara indrindra amin'ireo mpitarika indostria hafa ary mora hita amin'ny Internet.
Farany, avelao any amin'ny metadata fanatsarana ny horonan-tsary. Araka ny efa nolazaiko, indrindra indrindra ity lafiny iray amin'ny SEO sy ny asa fanatsarana ny lahatsary dia mitovy be. Ny fanoritsoritana ny horonan-tsarinao, ary koa ny lohateny rehetra:
bebe kokoa ny faneriterena sy fandraisana an-tsarimihetsika bebe kokoa
izay manan-danja sy voajanahary ho an'ny votoatin'ny tranonkala
Meta famaritana manomboka amin'ny tarehin-tsoratra 155
mitongilana mitongilana eo ambanin'ny 55